Chii chinonzi DMARC? DMARC Hondo Inotumira Email Phishing?
Chishanu, Mbudzi 6, 2015 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
Kana iwe uri muindaneti kushambadzira indasitiri, iwe unogona kunge wakanzwa nezvazvo DMARC. DMARC inomirira Domain-yakavakirwa Meseji Kusimbiswa, Kuzivisa uye Kuenderana. Kuti uwane rumwe ruzivo, ini ndinokurudzira zvikuru iyo Agari saiti uye yavo DMARC zvinyorwa uye peji rezvinhu nezvenyaya.
Maererano nenyanzvi pa 250ok, email yedu inotsigira, heino mabhenefiti eDMARC:
Inomisikidza kushanda uye kududzirwa kweanonyatso kuzivikanwa uye mazhinji-anotumirwa email echokwadi ekumisikidza SPF uye DKIM.
Inokubatsira iwe mukumisikidza uye kuendesa kweSPF uye DKIM pane ako ese ehova hova usingatyi kukanganisa kukanganisa.
Inoraira ISPs uye zvakavanzika madomeni mukudzivirira vashandisi kubva kune vanotumira vanoita zvisingabvumirwe uye nekunyepedzera kushandiswa kweako brand uye zvemukati.
Zvinokonzera vanogamuchira pasirese kuti vagadzire indasitiri-yakajairwa (asi yakavanzika uye neyako-maziso-chete!) Mishumo nezve tsamba dzavanogamuchira kubva kwauri.
250ok yawedzera DMARC Dashibhodhi kune yavo Reputation Informant, chishandiso chiri nyore kushandisa chakagadzirirwa kukubatsira kuti usimbise zvinyorwa zvako zveSPF neDKIM pamwe nekukubatsira iwe kuita shanduko inotsvedza kuenda kuDMARC.
Isu takatsigira uye takagadzira iyi infographic kubatsira vatengesi veemail kuti vanzwisise zvirinani dambudziko pamwe nekukosha mukutora iyo DMARC kududzirwa. Yakakosha yekutenda kune iyo yese DMARC timu iyo yakatibatsira kutidzidzisa uye nekupa iyo data inoshandiswa mune infographic!
Tags: 250okdkimDMARCdmarc kutaurwaemail kuburitswaphishing emailDMARC inoshanda seispfchii chinonzi DMARC
Maitiro Ekutevera Ekutungamira kubva Mukushambadzira kuenda Kutengesa
Consumer Dhata Unofanirwa Kuteedzera mune Yako Inopindirana Zvemukati